Aqoonyahan Shaqo Waayay - Galmada.net
Haayad deggan mid ka mid ah waddanada Qaaradda Afrika ayaa maalin iclaamisay in ay doonayso qof shaqaale ah. Waxaana waraaqihii shaqada lagu codsanayay soo xareystay dad aad u tiro badan. Dadkii si loo kala saaro waxa laga qaaday imtixaan. Markii uu dhamaaday na waxa la sheegay qofkii imtixaanka ku guuleystay, waxaana uu ahaa nin aad u buuran, sanweyn, waji ballaadhan, madow, socod xun oo qallaafo leh. Waxaana ninkii loo sheegay in uu xafiiska maareeyaha haayadda uu toos u tago.
Mid ka mid ah nimankii ayaa hadalkii bilaabay oo yidhi, “mudane, ka dib kolkii aanu aragnay aqoontaada iyo aragaagaba runtii waad na cajab galisay. Haddaba waxaanu ka codsanaynaa in aad si fiican noo dhageysato. Halkan aad joogtaa waa Afrika oo dantaada un baa laga fikiraa, sideedabana shaqo nooc walba oo ay tahay faa’iidadeeda un baa la eegaa. Sidaa daraadeed haayaddayadu waxa ay lee dahay beer xayawaan, oo ay dadku u soo dawaasho tagaan. Lacagna waanu ka qaadnaa. Haddaba dadka beerta dalxiisayaa badanaa waxa ay na wayddiiyaan hal xayawaan oo aan beerta joogin. Halkaas xayawaanna waa midka loo yaqaanno Goorilaha. Goorilahana waa aanu waynay. Haddaba shaqada aanu kaa doonaynno in aad noo qabataa waxay tahay; in aad adigu noo matashid goorile, maadama aad adigu u eeg tahay goorile!”
Ninkii oo ay indhihu ka soo dhaceen amakaak darteed ayaa isaga oo qaylinaya yidhi, “waar ma aniga oo ah Bani-aadam ayaad leedihiin xayaawaan iska dhig? Shaqada aad i direyseen ma noocan baa?”
Waxay sidaa ahaataba, ninkii oo maalin beerta dhex marmaraaya oo sidiisii goorile matalaaya, ayaa waxa uu meel dhow ka arkay libaax in yar u soo jira oo ku soo ordaya. Ninkii naxdin awgeed orod buu isa sii daayay isagoo samadaa ka qaylinaya. Dharkii shaashka lahaa oo aad u cuslaa awgeed ninkii tallaabo ayuu qaadi kari waayay illaa uu markii danbe dhulka ku Kufay. Libaaxiina intaa waa ku soo ordayaa. Ninkii waxa uu arkay in maanta aanu ka badbaadayn libaaxa, oo naftii waa uu ka quustay. Waxa se markiiba maskaxdiisii ku soo dhacday, “Maanta marka aad dhimato Alle waa uu ku cadaabayaa, waayo isagoo bani-aadam kaa dhigay ayaad adna xayawaan iska dhigtay. Ta labaad maanta la odhan maayo ninkii hebel ahaa libaaxbaa cunay, balse waxa la odhanayaa libaax baa halkaas goorile ku cunay, taasina waa ayaan darro labaad!”
Ninkii oo jiifa naftiisiina hanneeyay ayaa libaaxii soo gaadhay, ka dibna afarta lugood ayuu ka kala riday! Ninkiina cabaad ayuu ku dhuftay. Isagoo is leh talow wali ma adduunkiibaad joogtaa mise aakhiro? Ayuu libaaxii qosol ku dhufray, “Gihi, gihi, waar maxaad la qaylinaysaa doqonyohow xumi?” Ninkii waa yaabay kolkii uu arkay libaaxan Af-soomaaliga ku hadlayaa. Markaa suu haddana qaylo iyo cabaad isku sii daray. Libaaxii oo la yaabban ninka qayladiisa ayaa yidhi, “waar naga aamus waxyahow fulayga ahi, anba waxaan ahay aqoonyahan shaqo waayay oo filinka libaax ku metelayee! Beerta waxa jooga ma waxaad moodeysaa inay yihiin xayawaan? Waar waa wada aqoonyahan miidhan oo camal waayay ka dibna xayawaan laga dhigay!”